Article submitted by: minkyaw thuyein on 6-Dec-2012
ဆုတ် မပစ်နိုင်တဲ့ အခြေခံ အုတ်မြစ် ။
ဒို့လူကလေးများ ဆိုသလေး ၊
ယထာဘူတကျကျ အရှိကို အရှိအတိုင်း လေ့လာရရင် ကချင် ကယား ကရင် ချင်း ဗမာ မွန် ရခိုင် ရှမ်း လူ မျိုး ကြီး ၈ မျိုး လူမျိုးငယ် ၁၃၅ ရှိနေတဲ့ ဒို.နိုင်ငံ ဟာ ဘာသာရေး လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခတွေနဲ.ရစ်ပါတ်ရှုတ်ထွေးနေတဲ့ ချည်လုံးကြီး
ဖြစ်နေရတယ် ၊ သဘွတ်အူ ဆိုရင်ရော? ကချင် ကယား ကရင် ချင်း ဗမာ မွန် ရခိုင် ရှမ်း ဆိုတာ အက္ခရာစဉ် အလိုက် ဖေါ်ပြတာနော် ၊ ငါ့လူမျိုး စာရင်းရှေ.ဆုံးက မပါရလို.ဆိုပြီး ကလေးလို မျက်ရည်ခံ မထိုးကြနဲ. အုံး ။
ဒါနဲ့တောင် ဒို.တိုင်းရင်းသား မဟုတ်တဲ့လူမျိူးခြားတွေကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်ခံဘို့ နည်းမျိုးစုံ နဲ.အပြင်သူတွေက ဒို.ကို ဖိအားအမျိုးမျိုး ပေးနေကြပြန်
တယ် ။ ဒါ ဒို.ပြည် ဒါဒို.မြေလို. ဒို ကြွေးကြော်နေတာကို သူတို.ကြည့်နိုင်ပုံ နားခံသာပုံ မရဘူး ၊ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ရခိုင် ပြည်နယ်ကို ရိုဟင်ဂျာပြည်နယ် မူဂျာဟစ် နိုင်ငံတော် သာဖြစ်ရရင်တော့ ရာဇ၀င် ရိုင်းကုန်တော့မယ် ရခိုင်
ပြည်နယ် ကိုမှ ဒို.မကာကွယ်နိုင်ရင် နေရတာထက် သေရတာက မြတ်ပါသေးတယ် ကွယ် တို့ရယ် ။
ကိုယ်သုံးတဲ့ နုကလီးယား အညစ်အကြေးတွေကို ကိုယ်ပါတ်ဝန်းကျင် သန်ရှင်းခြင်တာနဲ.ဘဲ သူများ နိုင်ငံမှာ ပိုက်ဆံပေး မြှုတ်နေကြတာတွေရှိတယ် ၊
သူများညစ်ညမ်းမှာပါလားဆိုတာ နဲနဲလေးမှ မစဉ်းစားဘူး ၊ မြန်မာနိင်ငံဟာ လူအကာရဲ့ အမှိုက်ပုံ မဟုတ်ဘူး ။ မြန်မာဘဲဖြစ်စေ အခြားသူဘဲဖြစ်စေ လက်ခံ
တဲ့ နိုင်ငံနဲ. ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ၆ နဲ. ၉ မကွဲပြားသူ ၊ ကကြီး နဲ့ ယ ပက်လက်
မသိသူ ၊ ၀ိုင် ( Y ) နဲ့ လှည်းထောက်ကို ကွဲကွဲံပြားပြား မသိသူ တွေ ဖြစ်လိမ့် မယ် ။ ဒို.ဆီမှာလဲ ဒီလိုခေါင်းဆောင်မျိုးတွေ မရှိကောင်းပါဘူး ရှိရင် ဖါယ်ရှား
ပြစ် ရလိမ့်မယ် ။
ဒီလူတွေကို လူလူချင်း ညှာတာတယ်ဆိုရင် သူတို.နိုင်ငံ ခေါ်သွားကြပါလား
ဘာလို့ ၊ ဘာကြောင့် သူများဆီ လာပုံ နေတာလဲ ။ သူတို.ခေါ်ခြင်တဲ့သူတွေ
တော့ သူတို.ခေါ်နေတာဘဲ မဟုတ်လား ၊ မခေါ်ခြင်သူတွေကျတော့လဲ ၂ နိုင်ငံခြား ခြံစီးရိုး ခတ်ထားတာ တခါတလေများ အရှေ.ဘာလင်မြို.ဘက်ကနေ အနောက်ဘာလင်မြို.ကို ထွက်ပြေးကြ တဲ့ ပုံတွေကို တရေးရေးပြန်ပြီး မြင်
ယောင်မိတယ် ။ သနားကျင်နာရင် ကိုယ်အိမ်ပေါ်ခေါ်တင် ကိုယ့်သမီးနဲ.ပေးစား လိုက်ပေါ့ သူများကို ဘာလို. ဒုက္ခပေးနေတာလဲ ? ငယ်ထိပ်မှာ အဆိပ် ပါတဲ့ မောင်စံအိတ် နဲ့တွေ.ရင်တော့ သမီး ၃ ယောက်စလုံး ချောသွားလိမ့်မယ် ။
လက်ခံဘို.ဘာသာရေးနဲ.လူ.အခွင့်အရေးကို အယောင်ပြတယ်၊ ဒို.မှာ ဒို.ဘာသာ ဒို.သာသနာ ဒို.လူမျိုး ဒို.နိုင်ငံဆိုတာ ရှိပြီးသား ၊ ဒို.လဲလူဘဲ ဒို.အခွင့်အရေး ဒို.နိင်ငံဟာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံ။ ဒို.ဟာနဲ.ဒို.မှ အနိုင်နိုင် ။ ဒို.ကို ဘယ်သူကမှ သြဇာပေးစရာ မလိုဘူး ။ ဒို.ဟာ ခေတ်သစ် ကိုလိုနီ ကျွန်တွေ မဟုတ်ဘူး ၊ ဒို.ထဲမှာ လက်ပါးစေတချို.ရှိနေတာကို တော့ တွေ.နေရတယ် ။ ဒို.ခေါင်းဆောင်တွေကိုလဲ ဘေးပါတ်ခြာလည်က၀ိုင်းပြီး နည်းအမျိုးမျိုး ဒါးနဲ.ထိုး တုတ်နဲ. ရိုက်တာတွေ လည်မျိုညှစ် အနိုင်ကျင့် အကြပ်ကိုင်တာတွေကို လက်ဖျားစိပ်လို.မှ လက်ထိပ်မနာကြသူ လက်ပါးစေ မြန်မာတွေကို အပြတ်ရှင်း ဘိုရာ မြန်ာမာတိုရဲ.တာဝန် ။ သူတို အနာဂါတ်ဘ၀ဟာ အမြဲ ကိုယ်ဘ၀ကိုယ် မပိုင်တဲ. လက်ပါးစေ ကြေးစားဘဲ ဖြစ်နေလိမ့်မယ် ၊ ကျီးလန်.စာ စားနေရမယ်
ဘဲ ဖြစ်တယ် ၊ ဘယ်တော့မှ ကောင်းစားဘို. မမြင်ဘူး ။ သူတို.ကိုယ်တိုင်ရဲ.လွတ်လပ်ရေး လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ဆုံးရှူံးတာတောင် သူတို.မသိဘူး သူတပါး
အခွင့် အရေး ဆုံးပါးတာကို သိဘို.ရာဝေးရော ။
ဒို.ခေါင်းဆောင်တွေကို မရှူနိုင်မရှိုက်နိုင် ခေါင်းချာချာ လယ်အောင် အရူးလုပ် ၊ ဦးနှောက် နုရင် တော့ခံကြပေတော့ ၊ ဒို.ခေါင်းဆောင်တွေ အလုပ်ကိုအာရုံဏ် မစိုက်နိုင်အောင် လူ.အခွင့်အရေး ဆိုပြီးလုပ်နေတဲ့ လမ်းပေါ်နေ လမ်းပေါ်စား တွေဟာ နောက် တက်လာမဲ့ ဘယ်သူကိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ်ကလန်ကဆန် ကို့ရိုးကါးရား လုပ်နေမှာဘဲ ၊ ဒါ ဟာ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာပေါ့ ၊ သူတို.စားပေါက် သူတိုရဲ. အသက်မွေးကြောင်း စားနေကျ စားကွက်တွေ ၊ တဦးတယောက်က နေ.တွက် ပေးထား တဲ့ ကြေးစာတွေ ၊ ဘယ်သူပေးတဲ့ကြေးကိုမဆိုစားမှာဘဲ ။ ဘယ်သူက ကြေးပေးပေး ပေးသူနဲ.အိပ်တန်း တက်နေသူ လက်မနှေးသူ ၀န်မလေးဘူး ၊ သူ.ကို ဘယ်လို ခေါ်ရမလဲ နာမည်ပေးရမလဲ ? ။
နိုင်ငံရေးဆိုတာ အတိုက်အခံ မပါရင်မပြီးပါဘူး ၊ ဆန်ကျင်ဘက်ဆိုတာနေရာ
နိင်ငံရေးလောကမှာ ပြောပြောနေကြတဲ့ (Polictical Correctness ) နိုင်ငံရေး
အရ မှန်ကန်မှူဖြစ်ရအောင် ဒို.ခေါင်း ဆောင်တွေက ဖြစ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံး
ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက် နေတာကို သိတတ်ပြီး ကူညီဘို.ဝေးလို. ပျက်ပြား အောင် လူမျိုးစွဲ ဘာသာစွဲအစွန်းရောက်တွေက လုပ်နေကြတယ် ၊ အမျိုးသား ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး ရင်ကြားစေ့ ရေး ညီညွတ်ရေး လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို ပြောနေကြပေမဲ. တကယ်ရော ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရင်ကြားစေ. ညီညွတ်ခြင် ကြရဲ.လား ဆိုတဲ့ သန်း ၁၀၀၀ တန် မေးခွန်းဖြစ်လိမ့်မယ် ။ ၁၉၄၇ ခုကလဲ ပြည်ထောင်စုခဲ့ ကြတာ စုကိုမစုနိုင်ခဲ့ဘူး မဟူတ်လား ? ဘယ်လိုပုံနဲ.ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ပြန်လည် ပေါင်းစည်း ရင်ကြားစေ့ ညီညွတ်ကြမလဲ?
ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးဟာ ကချင် ကယား ကရင် ချင်း ဗမာ မွန် ရခိုင် ရှမ်း ဆိုပြီး အမည်နာမ ကွဲပြားပေမဲ့ တအိမ် ထဲနေ တရေထဲသောက်နတဲ့ မိသားစုဝင်တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကို သဘောမပေါက်နိုင်အောင်ဘဲ ရှိနေတယ်။ အချိူ.ကဆိုရင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို အားကျ ကြတယ် ၊ ဘာကိုအားကျ
တာလဲ မေးတော့ Freedom တဲ့ ၊ အဲဒါဘာလဲ ?
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သမိုင်း ဖတ်သလား လေ့လာသလား ဆိုတော့ ဖတ်တယ်တဲ့ ၊ ဘာသိသလဲ ပြောစမ်းပါအုံးဆိုတော့ ခွေအ လှည်းနင်း နေတယ် ။ ရေရေယာယာ မသိ ၊ ဘယ်လိုသိနိုင်ပါမလဲ ၊ ကိုယ့်သမို်င်းကိုယ့် ရာဇ၀င်လဲမဟုတ် အချိန်မရလို. စာမျက်နှာ ၁ နဲ. နောက်ဘိတ်ဆုံးစာမျက်နှာကို အကြမ်းဖျင်းတခေါက်သွက်သွက်လေး ဖတ်လိုက်တယ် ၊ အလယ်စာမျက်နှာ
တွေကိုတော့ ကျော်ဖတ်လိုက်တယ် ၊ ထားပါတော့ ဖတ်သလောက်ဘဲ အကောင်း အဆိုး ဘယ်လို သဘောရသလဲ ၊ ဘယ်လိုသဘောပေါက် နားလည်သလဲ ?
ကိုယ့်အိမ်လဲမဟုတ် သူများဆောက်တဲ့အိမ်ပေါ် အခန်.သား သွားနေကြတာ မြန်မာ့သတ္တိ လို.ပြောရမှာလား ။ ကိုယ်က သွားတော့ ရေကြည်ရာမြက်နုရာ လို.ပြောတယ် ၊ သူများ က လာတော့ နယ်ချဲ.တာ တဲ့ ။ ဒို.သူများနိုင်ငံကို သွားပြီး နယ်ချဲ.နိုင်ကြပြီးနော် နယ်ချဲ.ပဒေသရာဇ် စံနစ်တဲ့လား၊ ကျွန်သွားခံကြတာလား
ဆိုတာကတော့ ကိုယ်.အဓိပါယ်နဲ.ကိုယ် ပေါ့လေ။ ကိုယ်ပါးစပ်ထဲကစကားဟာ ကိုယ့်စကားဘဲပေါ့ ။ အနဲဆုံးတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးဆိုတာဘဲ့ ။ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှု မရှိလို.ပါ လို.ဆိုရအောင် ဘယ်သူတွေက မတည်ငြိမ်
အောင်လုပ်နေသလဲ ၊ ကိုယ်ကရော တည်ငြိမ်အောင် ဘာများကူညီဆောင်ရွက်
သလဲ? မြန်မာအကျင့်ကောင်းတွေလို.ပြောရမလား ။ အမယ် တယ်ဟုတ်နေ ကြပါလား ။
တရုတ်ပြည် အုတ်တံတိုင်းကြီး ၊ ဘာလင်မြို.အင်္ဂတေတံတိုင်းကြီး (မရှိတော့) ၊ ကန်နဲ.မက္ကစီကို ကြား ခြံစီးရိုး ၊ ကိုရီးယား ၂ နိုင်ငံ ကြားက တပ်စီးရိုး ၊ အခြားခြားသော တံတိုင်းတွေ ဟာ နယ်ခြားသတ်မှတ်ချက်တွေဘဲဖြစ်တယ် ။
ဒို.နိုင်ငံနဲ. အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ ကြားမှာ တံတိုင်း ခြံစီးရိုးတွေရော တပ်စီးရိုး
တွေပါ အထင်ကရ အထင်အရှားရယ်လို. မရှိပေမဲ့ တတ်နိူင်သမျှ ချောမွတ်နေ
တယ် ။ တောတောင် ထူထပ် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းလို.ဆိုပေမဲ့
ပိုက်ပေါက်က လွတ်သွားတဲ့ ငါးတွေလဲ ရှိလိမ့်မယ် ၊ အမြတ်အစွန်းကြီးများ ရှိလှတဲ့ လူကုန်ကူးတာတွေလဲ ရှိလိမ့်မယ် ။ အထူးသဖြင့် တရုတ်မြန်မာ နယ်ခြားမှာ အတော် ဆိုးနေတယ်လို.သတင်းတွေလွင့်နေတယ် ၊ တိတိကျကျ ဘာမှပြော မထားဘူး ။ြေ့ပာခြင်တာ ပြောလို.ရတယ် ၊ တရားဝင် ပြောခြင်ရင် စွပ်စွဲခြင်ရင် တရားဝင် သက်သေတွေအထောက်အထားတွေ တင်ပြရလိမ့် မယ် ။
ဒီလိုလဲ မဟုတ်ပြန်ဘူး ။ ပါးစပ်ကပြောခြင်တာ ပြောလိုက်ရရင် ပြီးရော ။
တိုက်တွန်းခြင်တာ အားပေးခြင်တာက ၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးစေခြင်ရင် ဥပဒေ
အတွင်းက လုပ်ရမယ် ။ ပါးစပ်မှာ သျှာအရိုး မရှိတိုင်း၊ အရူးလိုလို အပေါလိုလို အလကား တွေ.ကရာတွေ လျှောက်ပြောနေကြလို. မကောင်းဘူး ရန်မီးပွားရုံ
ဘဲရှိမယ်။ တယောက်နဲ့တယောက် အယုံအကြည် ကင်းမဲ့ရုံဘဲရှိမယ် ပြသနာ
နိုင်ငံနဲ.လူမျိုးတိုးတက်စေခြင်ရင် အရေမရ အဖတ်မရတွေ ပြောဆိုလုပ်ကိုင်
နေတာတွေ ရပ်ပြီး တိုးတက်ရာတိုးတက် ကြောင်း အကြံဥာဏ်တွေ အကျိုြး့ပု လက်တွေလုပ်ငန်းတွေနဲ. တိုင်းပြည်တာဝန် လူမျိုးတာဝန်ကို ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က တပိုင်းတစ ယူသင့်တယ်။
ဒီနေ. ( နိုင်ငံရေးအရ မှန်ကန်မှူ) ဆိုတာကို ဆက်ပြီးဆွေးနွေးခြင်တယ်။ ဒို. နိုင်ငံကို ဘာခေါ်မယ် ဆိုတာ နိုင်ငံတော် ဖွဲ.စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ အတိ အလင်းပြဌာန်းပြီးသား၊ ဥပဒေ လေးစားလိုက်နာသူတိုင်းဟာ တရားဥပဒေ စိုးမိုး စေလိုသူတိုင်းဟာ ပြဌာန်းထားတဲ့ အတိုင်းခေါ်ရလိမ့်မယ် ၊ ဒို.နိုင်ငံဟာ (ဗမာနိုင်ငံ ) လို. ပါးစပ်စကားနဲ.ခေါ်နေရာက (မြန်မာနိုင်ငံ) လို.စာစကားနဲ.ဖတ်တဲ့အသံရော ရေးတဲ့ အမှန်ကိုပါ ပြင်ခေါ်ငာာဟာ အဓိပါယ်ရှိတယ် လိုအပ် တယ်ဆိုတာလဲ သိကြပြီးဖြစ်တယ် ။ ပတ်မကြီးတီးစရာ ၊ မောင်း ထုစရာ လိုအုံး မလား ။
မြန်မာနိုင်ငံကို ၈ စိပ် စိပ်ပြီး ခြံစီးရိုးတွေ အုတ်တံတိုင်းတွေ တပ်စီးတွေ ခတ်ထားပြီးအချုပ်အခြာ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံငယ် ၈ ခု တည်ထောင်ဘို.ဆိုတာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ အတိတ်ကလဲ မဖြစ်ခဲ့ဘူး နောင်ကိုလဲ ဖြစ်လိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူး ။ မဖြစ်ရတဲ့အကြောင်း က အာကာတကြီးလွန်းနေတယ် ၊ အညှိုးကြီးလွန်းနေတယ်။
မလိုလားသူတွေကတော့ ဗမာ လူမျိုးစုဝင်အများစုရှိတဲ့ ဒို.နိုင်ငံမှာ ဗမာတွေ လက်ဝါးကြီးအုပ် စိုးမိုး နေတာလို. ရိုးစွပ်တယ် ၊ အထူးသဖြင့် ဒီစကားကို ကေအင်ယူ ကရင်ခေါင်းဆောင်တွေက ပြောခဲ့တာ ၊ ဒါကြောင့်လဲ မြန်မာ့ သမိုင်း လေ့လာသူတွေက အင်္ဂလိပ် လက်အောက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကရင်နဲ.တခြား လူမျိူးစုဝင် တချို.ကို ကြေးပေးပြီး ဗမာတွေကို တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်
ခိုင်းခဲ.တာတွေကို ပြန်ပြီးထောက်ပြတောမှ ငြိမ်သွားတယ် ။ ပြောကြမယ်ဆိုရင် သူဖက် ကိုယ့်ဖက် ပြောစရာတွေ အများကြီးပေါ့ ၊ ထောက်ပြစရာလက်နက်ကိုင်
ကရင် (KNU) နဲ. (KIA) ကချင်နဲ. ၊ ချင်းတို့ဟာ ခရစ်ယန်ဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်ပြီး ရိုဟင်ဂျာ( နိုင်ငံမဲ့) ဆိုတာကတော့ မွတ်စလင်တွေဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ဘဲ ။
(ရန်ကိုရန်ချင်း မတုန်.နှင်းနဲ.) ဆိုတဲ့ စကားအရ ဗမာတွေဟာ အေးအေး
ဆေးဆေးနေခဲ့ကြတယ် ၊ လူကြီးတွေ အထိမ်း ကောင်းကြတာဟာ အရင်းခံဘဲ ၊ တူညီသော ဆန်.ကျင်ဘက်တုန်.ပြန်မှု နိယာမ သဘောအရ ဆိုရင် လူမျိူးရေး
ကို လူမျိုးရေး ၊ ဘာသာရေးကို ဘာသာရေး လိုအပ်သလို တုန်.ပြန်ရရင် မြန်မာ့ မြစ်ကြီး ၄ သွယ်နဲ. မြစ်လက်တက်တွေ သွေးချင်းချင်း နီ သွေးချောင်းစီးသွား
စရာ ရှိတယ် ။
ဒါတွေဟာ ပြီးခဲ့ပြီ လွန်ခဲ့ပြီလို့ အကောင်းအမြင်နဲ.တတွတ်တွတ် ပြောနေဆဲ
မှာဘဲ ဖြစ်နေတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေက မပြီးသေး တာကို သက်သေခံနေတယ် ။ ငြိမ်းချမ်းရေးအမှတ်တကယ် လိုလားမြတ်နိုးသူ လူမျိုးစုတိုင်းဟာ မိမိတို.
အသိုင်းအ၀ိုင်း ထဲမှာ ရှိနေသေးတဲ့ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အစွန်းရောက်ဝါဒီ
အတူတကွ ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲ နေထိုငရေး အသိပညာတွေ ပေးရလိမ့်မယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုးနဲ.ဘာသာကို စွဲပြီ့း နယ်ခြား သတ်မှတ် အုတ်တံတိုင်းတွေ ခြံစီးရိုးတွေ တပ်စီးရိုးတွေ တည်ဆောက်ဘို.ဆိုတာဟာ သဘောတရားရော
လက်တွေ.ပါ မဖြစ် သင့်ဘူး။
ပြည်ထောင်စု သမတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဆိုတာကို ဘားမား လို.ဘဲ ခေါ်မယ်ဆိုတော့ ၊ ဘာလဲ ပြန်ထောင်စု သမတ ဗမာ နိုင်င်ငံတော် ပေါ့လေ ဟုတ်လား ။ ဗမာနိုင်ငံဆီ ပြန်သွား မလို.လား ? ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒ ဆိုတာ ဆီလား? အမေရိကန် ကို ဘုရားထင်တဲ့ မြန်မာရိကန် နဲ. လက်ပါးစေ တချို.သိဘို.က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ ပြည်နယ် ပေါင်း ၅၀ ၊ ပြည်နယ်( ဒေသန္တရ အစိုးရ ၅၀ ရှိတာမှန်ပေမဲ. သူတို.မှာရှိခဲ့သမျှ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး
စုတွေရဲ.အမည်ကို အစွဲံပြုပြီး ပြည်နယ် ခွဲခြားထားတာတော့ မဟုတ်ဘူး ။
ကန်ပထစ သမိုင်း ဟာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ် မှတ်သား ကောင်းပါတယ် ဘာတွေကို စိတ်ဝင်စားပြီး ဘာတွေမှတ်သားကြတယ်တော့ မသိဘူးပေါ့ ၊
ကန်ပထစ မဖြစ်မီ သူတလူ ငါတမင်းဆိုတာရှိခဲ့ဘူးတယ်လို.သိရတယ် ၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေ သူတလူ ငါတမင်း တွေထဲက တချို.ကိုခေါင်းဆောင်မှူ တခုထဲအောက်မှာ စည်းရုံ နိုင်ခဲ့မှူရှိခဲ့ပေမဲ့ တိုင်းရင်းသား အားလုံးတို. တစု တစည်းထဲ မဖြစ်ကြမီ ၊ မညီညွတ်ကြမီ ဥရောပ ကရောက်လာတဲ့ အခြေချ သူတွေက စစ်တပ်နဲ.ပေါင်းပြီး အပြတ်ရှင်း ပစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သမိုင်းမှတ်တမ်း
တွေမှာရှိတယ်။ ယူဆခြင်သလိုသာ ယူဆကြပေတော့ ၊၊
ကြုံလို. မှတ်သားဘူးတာလေး တင်ပြရရင် ကန်ဌာနေတိုင်းရင်းသား (Sioux).လူမျိုးစုဝင် Oglala Lakota အုတ်စု အကြီးအကဲ စစ်ကဲ Red Cloud, (1822 – December 10, 1909) က “What has been done in my country I did not want. Did not ask for white people going through my country. When the white man comes in my country, he leavesatrail of blood behind him.” လို.ပြောခဲ့ဘူး သတဲ့ ။
အကောင်းဖက်ကကြည့်ရင် ကန်ပထစ အဲဒီကတည်းက ညီညွတ်မှူရှိပြီး သူတလူ ငါတမင်း အခြေအနေကို ပြန်ရောက် ဘို.လမ်းတော့ မရှိဘူး ၊ အကြောင်းကတော့ ကန်ပထစမှာ ရှိသင့်တဲ့အင်အား အားလုံးရှိတယ် ၊ တောင်တင်းခိုင်မာတယ်၊ ငွေကို ရေလိုသုံးတယ် ၊ တကမ္ဘာလုံးမှာ လုပ်သမျှ တင့်တယ် တယ် ။ လုပ်စရာရှိရင် ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်တယ် ၊ အဓိက က သူတပါးကို စည်းလုံးညီညွတ်ခွင့်မပေးဘူး တောင်တင်းခိုင်မာစေမဲ့ အခွင့်
အလန်းမှန်သမျှ ပိတ်ဆို့ဟန်.တား တယ် ၊ သူသြဇါကလွဲရင် ဘယ်သူ.သြဇါမှမခံရဘူး။ လက်ဝါးကြီူအုပ်ဝါဒဆိုတာ ဘာလဲ ?